यस्तो सपना देख्नुभयो ? हुनेछ फलिफाप
हामिले देख्ने सपनाले धेरै कुरा बताइरहेको हुन्छ । जीवनमा घट्न सक्ने सम्भावित घटनाबारे पनि सपनाले संकेत गर्ने धर्मशास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ । सपनामा देखिएका केही कुराले भविष्यमा आइपर्ने जोखिम तथा शुभफलको बारेमा संकेत गर्ने बताइन्छ ।
हामीले कस्तो सपना देख्दा के लाभ मिल्छ भन्ने कुरा जानकारी दिँदै छौं–
सुर्य: सुर्य उदाएको देखे धन लाभ हुन्छ, रोगबाट मुक्ति मिल्छ।
सुर्य: सुर्य निलेको देखे उत्तम पुत्र प्राप्ति हुन्छ।
चन्द्रमा: चन्द्रमा उदाएको देखेमा रोगबाट मुक्ति मिल्छ।
बादल: बादल अलि-अलि लागेको देखे रोगबाट मुक्ति मिल्छ।
घाम: घाम लागेको देखेमा पदोन्नती वा लाभ हुन्छ।
पहाडमा हिड्नु: उन्नती हुने संकेत हो। अपार धन मिल्न सक्छ।
समुन्द्र: समुन्द्रमा पसेको देखे शुभ समाचार मिल्छ। धन प्राप्त हुन्छ।
झरना: झरना देखे दु:खबाट छुटकारा मिल्छ
बिहानै यी चिज देखेमा तपाईंको पुरै दिन शुभ हुनेछ
तपाईं बिहान घरबाट निस्कने बेला के कुरा देख्नुभयो, त्यसले तपाईंको दिनबारे थाहा हुने समुद्रशास्त्रमा उल्लेख छ । तपाईंको बिहानी राम्रो भयो भने दिन पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । बिहान उठ्ने वित्तिकै कस्ता चिजहरु देखियो भने दिन शुभ र अशुभ हुन्छ त ?
तपाईंले बिहान उठ्ने बित्तिकै श्रृंगार गरेकी स्त्री देख्नुभयो भने तपाईंको दिन शुभ
– चट्ट श्रृंगार गरेकी स्त्री : तपाईंले बिहान उठ्ने बित्तिकै श्रृंगार गरेकी स्त्री देख्नुभयो भने तपाईंको दिन शुभ हुने छ । यतिमात्र होइन, उठ्ने बित्तिकै रातो कपडा लगाएकी स्त्री देख्नु पनि शुभ लाभ हुने संकेत हो ।
– आगो : तपाईले बिहान उठेर कतै निस्कदै गर्दा आगो देख्नु भयो भने त्यो शुभ संकेत हो । यसले तपाईंको दिनलाई उर्जाशील बनाउने कुरा धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
– धर्मग्रन्थ : तपाईंले बिहान उठ्ने बित्तिकै धर्मग्रन्थ देख्नुभयो भने तपाईंको दिन राम्रो हुन्छ । अझ धर्मग्रन्थ अध्यन गरिरहेको वा बाचन गरिरहेको व्यक्तिलाई देख्नुभयो भने तपाईंलाई लाभ मिल्छ ।
– गाई : हिन्दु धर्ममा गाईलाई भगवानको रुपमा पूजा गरिन्छ । यदि तपाईंले बिहान उठ्ने बित्तिकै गाई देख्नु भयो भने पनि त्यसको संकेत शुभ हुन्छ । अझै कालो रंगको गाई देखिनु त झनै उत्तम हो ।
प्रकाशित मिति August 6, 2019